Gbasara anyị - Nkwakọ ngwaahịa na mbipụta CO., LTD
Ebe ị tụkwasịrị obi nke nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe!
Nkwakọ ngwaahịa na mbipụta akwụkwọ Evergreen (EPP) na -etinye ego na injin na teknụzụ nkwakọ ngwaahịa kachasị ọhụrụ, ma na -etinye ha n'ime sistemụ nrụpụta dị elu zuru oke.
Usoro a gụnyere 7+1 9+1, 7+5 igwe na -ebi ngwa ngwa 3, igwe lamination 3 set (obosara lamination ruo 1600mm), igwe na -eme akpa 7, igwe ịkpụ modulu 2 set.
Anyị na -etinye ma na -arụ ọrụ ụlọ nyocha, nke na -akwadebe onye na -anwale ihe nlele, onye na -anwale onye na -anwale, onye na -anwale ọnwụnwa, onye na -anwale ule, ịgbatị na onye na -anwale ike, yana, ite ọkụ mgbakọ, iji jide n'aka na a ga -echekwa ngwaahịa niile nwere arịrịọ dị mma dị elu na mmepụta.
Site na ikikere imepụta ihe nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe, a na -azụta akụrụngwa niile site na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ dị elu nke nwere njikwa mma.
EPP na-etinyekwu nlebara anya na nchekwa, ịdị ọcha ngwaahịa, na nzuzo, yana onye nche elekere 24, sistemụ nlekota telivishọn mechiri emechi, na mkpu ụgbọ ala.
Anyị na-ewusi ụlọ ọrụ na mmepụta ịdị ọcha ike ma na-enye nyocha maka ndị ọrụ. A na-etinye ihe nkiri mkpofu 100% iji gbochie ojiji nke akụkụ na akụkụ adịghị mma.
Ndị ọrụ nọ na EPP bụ ndị otu ọkachamara na-arụpụta nsonaazụ, teknụzụ nwere ọgụgụ isi, na ọrụ dabere. Ọtụtụ n'ime ha nwere ahụmịhe afọ n'ime idu ndị ụlọ ọrụ na -ebugharị ihe na -agbanwe agbanwe tupu ha abanye na EPP. Egosipụtara na ha bụ isi mmalite maka uto ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ na nghọta miri emi ha banyere ngwa nkwakọ ngwaahịa na ihe okike ha na-adịghị agwụ agwụ nke azịza dabara adaba maka ihe ndị ahịa chọrọ pụrụ iche.
N'ịbụ ndị nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ anyị na -akwalite '' ịdị mma bụ ndụ anyị '', anyị na -enye ndị ahịa anyị ohere teknụzụ na akụrụngwa kachasị ọhụrụ, ndị ọkachamara nkwakọ ngwaahịa nwere ahụmịhe, ezigbo mma, usoro ọnụahịa dị ọnụ ala yana ọrụ ndị ahịa ọkachamara. EPP abụrụla onye na -eweta ngwungwu ngwugwu maka ọtụtụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche na ụlọ ọrụ na -eduga ngalaba dị iche iche, gụnyere ụlọ ọrụ azụ azụ mba China, Shandong nnu na -ere Corp, otu nri mmiri mmiri nke Shanghai, Shanghai PET nutrition Inc na ndị ọzọ. Na mgbakwunye na China, ngwaahịa anyị na -eje ozi n'ahịa dị na North America, EU, Oceania, Japan, South Korea, Russia, wdg.
Ihe ọ bụla ihe nkwakọ ngwaahịa gị dị, EPP dị njikere ịnye azịza ahaziri ọnụ dị ọnụ ahịa yana ezigbo mma na ntụkwasị obi.